E-Journal: September 2008
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:07 PM4comments
ပညာပြည့်ဝ၊ ဘွဲ့ တွေရလို့ 
မိဘနဲ့ ဝေး၊ တာဝန်ပေးလို့ 
နားဖို့ ချိန်၊ ဘယ်မရှိ
စားဖို့ ဆန်၊ ၀ယ်ချိန်မရှိ
ဟိုလူကအော်၊ ဒီလူငေါက်နဲ့ 
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 5:00 PM5comments
အသံကုန် အော်ဟစ်ပြီး အကူအညီတောင်းနေပေမဲ့
အလွမ်းတွေ ကျနော့်ကို ရစ်ပတ်လိုက်တာ
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တောကြောင် at 8:16 PM3comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:37 PM2comments
သင်အိမ်ထောင်ကျမကျ ဒီအခြေအနေနဲ့ စမ်းသပ်ရအောင်
ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးကြမယ်။ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ တောတန်းတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းအသွား အန္တရာယ်တစ်ခုနဲ့ တွေ့တယ်ပေါ့။ အသက်လုပြီး ပြေးနေရတယ်။ မောပန်းနွမ်းနယ်နေပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကမ်းပါးတစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်ရတယ်။ ခင်ဗျား အရမ်းပင်ပန်းနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ အသက်ဘေးနဲ့ ကြုံတွေ့နေရလို့ ကမ်းပါးရံကို ကျော်ဖြတ်ကို ဖြတ်ရတော့မယ်။ အားတင်းလို့ ကျော်ဖြတ်နေတုန်းမှာ ခင်ဗျားရေအရမ်းဆာလာတယ်။ နည်းနည်းလောက် ဆက်ကြိုးစားလိုက်ရင်လည်း ကမ်းပါးကို ကျော်ဖြတ်လို့ အန္တရာယ်ကနေ လွန်တော့မယ်။ ရေကလည်း အရမ်းဆာနေပြီ။ ဆိုးသွားတာတစ်ခုက ခင်ဗျားရေသောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကမ်းပါးရံအောက်ခြေကို ဆင်းသောက်ရမယ်။ ရေကလည်း ရနိုင်တာ ဒီတစ်နေရာပဲ။ ကမ်းပါးရံရဲ့ဟိုတစ်ဖက်မှာက ရေအတွက်မသေချာဘူး။ အောက်ခြေမှာ အန္တရယ်နဲ့ရေ ရှိနေလေရဲ့။ ခင်ဗျားဘာ လုပ်မလည်း။ စိတ်မှာ ပုံဖော်ခံစားကြည့်ပြီး အဖြေတစ်ခု စဉ်းစားထားလိုက်ပါ။ ခင်ဗျား ကမ်းပါးရံကိုပဲ ကျော်ဖြတ်တော့မှာလား၊ ရေဆင်းသောက်မလား။
ပြီးမှ ဆက်ဖတ်ရန်ကို နိပ်နော်။
ခင်ဗျားက ကမ်းပါးရံကိုပဲ ကျော်ဖြတ်လို့ သွားတော့မယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျဖို့အတွက် သိပ်မသေချာသူပါတဲ့။ သူတို့ပြောတာကတော့ အကျပ်အတည်းတစ်ခုကို ဖောက်ထွက်ရာမှာ ကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ် ရွေးချယ်လို့တဲ့။
ခင်ဗျားက ရေဆင်းသောက်အုံးမယ် ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ကျဖို့ ရာနှုန်းများသူပါတဲ့။ အကျပ်အတည်းတစ်ခုမှာတောင် အသက်ကိုပဓာဏမထားပဲ အန္တရာယ်ရှိရာကို ပြန်သွားလို့တဲ့။
ဟုတ်မဟုတ်တော့ အရမ်းမတွေးကြပါနဲ့။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပျော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးလို့မှတ်မိနေတာလေးပါ။ ဒီမေးခွန်းလေးကို သိပြီးသားဆိုရင်တော့လည်း ပြုံးသွားလိုက်ယုံပေါ့နော။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျွန်တော်ကတော့ ရေဆင်းသောက်သေးတယ်ဗျ။ ဟီး…ဟီး..။ အခုထိကတော့ ရည်းစားမရှိ လူပျိုပါခင်ဗျာ။း)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 12:41 PM 14 comments
အစားကောင်းစားရတဲ့အခါ ချစ်သောသူကို သတိရတယ် - တဲ့။
ကိုယ့်အတွက် သာမြင်ညောင်ညဟာ တစ်ချို့ အတွက် ရာထောင်မက ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အခု ကျနော့်ရဲ့ ရာထောင်မကတွေကို ခင်များတို့အား ဝေမျှလိုပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ တာဝန်တစ်ရပ်ကို ထမ်းရွက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်……
မင်းလည်း ပြောစရာရှိတာ မပြောနဲ့တော့။ ငါလည်း ပြောစရာရှိတာတွေ မပြောတော့ဘူး။ မင်းကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မြို့၊ မင်းငယ်ဘဝ၊ ငါကြီးပြင်းခဲ့ရာမြို့၊ ငါ့ငယ်ဘဝ။ ငါတို့ရဲ့အမှတ်ရစရာတွေ။ ငါတို့ရဲ့ခံစားမှုတွေ။ ငါတို့သီခဲ့ကြတဲ့တေးတွေ ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားလိုက်ကြစို့။ လူဆိုတာ ပျော်ရွှင်စရာတွေ့ရင် ပြုံးရယ်မှာပဲ၊ ဝမ်းနည်းစရာတွေ့ရင် ငိုမိမှာပဲ။ အကျပ်အတည်းတွေ့ရင် ရုန်းကန်မှာပဲ။ ငါတို့မမြင်နိုင်သေးတဲ့ တရားဓမ္မတွေ၊ ငါတို့မသိသေးတဲ့ သံဝေဂတွေ သူ့အတိုင်းပဲရှိနေပါစေကွာ။ ဘယ်အရာကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မလဲ။ ဒါကို ငါစဉ်းစားမိသလို ဘယ်အရာကို ပိုဆိုးမသွားအောင် လုပ်ထားနိုင်မလဲ။ မင်းလည်း စဉ်းစားမိမှာပါကွာ။ တို့ ဒီနေ့အဖို့ ပေါင်မုန့်ကလေးတစ်လုံး ကောင်းကောင်းဖုတ်မယ်။ သလဲပင်ကလေးကို ရေလောင်းမယ်။ အဝေးကရောက်လာမယ့် စာပို့သမားကို စောင့်မျှော်မယ်။ မင်းလည်း ပြောစရာရှိတာတွေ မပြောနဲ့တော့၊ ငါလည်း ပြောစရာရှိတာတွေ မပြောတော့ဘူး။ အတွေ့အကြုံဖြတ်သန်းမှု မတူပေမယ့် ခံစားချက်တွေဟာ ဒီအတိုင်းပဲ။ ကမ္ဘာကြီးဟာလည်း တစ်ခုတည်း။ မနက်လင်းရင် အရှေ့ အရပ်က ထွက်ပေါ်လာမယ့် နေမင်းကြီးကို ငါတို့ စောစောထကြည့်မယ်။ ငါတို့ငြင်းခုန်ဖို့ မလိုတော့ဘူး။ ငါတို့ဆွေးနွေးဖို့ မလိုတော့ဘူး။ စက်သီးကြိုးနဲ့ ကျောက်တုန်းရေတွင်းထဲကရေကို ငါငင်မယ်။ မင်းက သလဲပင်ကလေးကို လောင်းပါ။ တကယ်တော့ ပေါင်မုန့် တစ်လုံးထက် ပေါင်မုန့်နှစ်လုံးက ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် ပေါင်မုန့်တစ်လုံးပဲ မင်းဖုတ်ခဲ့လည်း ငါကျေနပ်ပြီ။ မီးဖိုထဲက မီးတွေ ငြိမ်းသွားလို့ အအေးဓာတ် စတင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင် မင်းငါ့အနားကိုတိုးပါ။ မင်းကို ငါပွေ့ဖက်ထားမယ်။ နွေးအောင်ပေါ့။ ဒီထက်မပိုဘူး။ တကယ်လို့ မင်းနားထောင်ချင်ခဲ့ရင် ငါအလေးအနက် ပြောခဲ့တဲ့စကားကို ဘေးဖယ်ထားပြီး မင်းကို အကြောင်းအရာတစ်ခု ပြောပြမယ်။ ဟိုး ငါငယ်ငယ်တုန်းက ကြောင်ကလေးကို လက်သဲညှပ်ပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေ။ မင်းလည်း ခုထိ အမှတ်ရနေတဲ့ ငယ်ငယ်က မိုက်မဲမှုတစ်ခုခုကို ပြောပြပါ။ ငါနားထောင်ချင်လို့။
(ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်း၊အမှတ် -၉ ၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၀၆)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:25 AM 1 comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် မာရေးသျှင် ဝေမျှခြင်း အနုပညာ
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 3:22 PM 10 comments
နှလုံးသွေးတစ်စက်နဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် စီးဆင်းနိုင်တဲ့ မြစ် ဖြစ်တယ်
စကြာဝဠာထဲမှာ (ဒါမှမဟုတ်) လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ
ရှုမဆုံးအောင် ရုန်းကန်လှပနေတဲ့ သဘာဝတရားငယ်တစ်ခုလို့
သြော် ………. ဘယ်သူတွေများ ချစ်နိုင်ပါလိမ့်။
ဒီတစ်ခါတော့ ဗုံသံတွေထဲ ကျွံကျနေတဲ့ ကဗျာအလှ ကို ရွတ်ပါရစေ။
ဒါဟာ ကျနော် ကဗျာမရေးဖြစ်ခြင်း အကြောင်းရင်းကို ဖွင့်ဆိုခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် အနေအထားကို မတ်မတ်ကလေးထားလိုက်ပါ။
ပြီးမှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ရှုထုတ်ပါ။
အဲသလို (၅) ကြိမ်၊ (၅) ခါ လုပ်ပါ။
ကဲ ကျနော်ကဗျာ ရွတ်ပါတော့မယ်။
ကိုယ် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊
အထင်းသား ကိုယ်မြင်ခွင့်ရတယ် ။
ကဗျာရေးဖို့ မကောင်းပါဘူး ၊
မွှေးရနံ့တွေကို ငေးကြည့်နေဖို့ကောင်းပါတယ် ။
101ဆိုတဲ့ အိပ်ခန်းလေး မပါလည်းဖြစ်တယ်
မြို့ကလေးရေ မင်းကတော့ မပါလို့
မြို့ကလေးဟာ သူလှတာကို သူသိမနေရင်
သူဟာ ဒီထက်ပိုပြီး လှနေမှာပဲ ၊
သူ့ထံမှာ သားပျော်ပါတယ် ….. ဒါပေမယ့် မေမေရယ်
လေကောင်းလေသန့်တွေ ၊ ပန်းခင်းတွေ
မနက်စောစောကြီး ….. မြို့ကလေးအပေါ်ကို
ချယ်ရီပန်းတွေအားရပါးရ ကြွေကျလို့ …..
မေမေ့သားရဲ့နှလုံးသားငယ် မိုးရေတွေ ရွှဲ လို့ ။……………။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:06 PM6comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 7:52 PM4comments
အိပ်စက်ရတဲ့ ညတွေလဲ များပြီ။
မင်းရဲ့အကြည့်တွေကို အထင်းသား မြင်ရတဲ့အခါ …
မင်းရဲ့ စကားလုံးတွေ ကိုယ့်ပေါ်လျှံကျလာတဲ့အခါ …
မင်းကို ဖွဖွလေး ခိုးနမ်းနေမိတယ်။
အရိပ်ကလေးရယ် ... ။………………..။
Material : တိတ်တခိုး (တောကြောင်)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:32 PM2comments
သူငယ်ချင်းကသူ့ ကိုပြဖူးပေမဲ့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပါပဲ....
သူကနေတဆင့် တခြားသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်....
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့ ကိုမယ်စွဲလန်းမှန်းမသိစွဲလန်းလာမိတယ်....
တစစနဲ့ သူ့ အပေါ်တွယ်တာလာမိတယ်...
သူနဲ့ စကားတွေမပြောဖြစ်ပေမဲ့ သူကိုမယ်မမေ့ပါဘူး…
အင်း… မယ်ရဲ့ အကြောင်းကြောင်းသောကိစ္စတွေကြောင့်...
ဒီနောက်ပိုင်း သူ့ နဲ့ စကားပြောခွင့် ….
သူ့ ကိုမြင်တွေ့ ခွင့်မရှိခဲ့ရင်တောင်…
အဲဒီတနေ့ ကိုမယ်မျှော်နေတယ်ဆိုတာသူသိပါစေလို့ ……
မယ်(93း0 , 20.9.08)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 12:04 PM2comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် Asterisk, အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
တနေ့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီဘောက်စ်လေးမှာ လာပြောသွားပါတယ်။
Anonymous: သုခမိန်(E-Journal) ရေ.. ဘာများဖြစ်လို့ ကျွန်တော့ကဗျာကို ကူးထားတာပါလဲ.. တိုက်ဆိုင်မိသွားလို့ပါလားခင်ဗျာ.. ဘယ်သူ့ဆီက ကြည့်ကူးတာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်.. တိုက်ဆိုင်သွားရင် ပြန်ဖျက်ပေးပါ့မယ်။
18 Sep 08, 03:58
အဲဒီ စကားစုလေးကို မြင်မြင်ခြင်း ကျွန်တော် ကြောင်သွားတယ်။ နောက်တော့ ပြုံးမိတယ်။ ကျွန်တော်က ကဗျာရေးတာနည်းတယ်။ မရှိသလောက်ပါ။ အရေးလည်း မကောင်းဘူး။ ဒီလိုအပြောခံလိုက်ရတော့ “မဟုတ်တာလို့”ပဲ တွေးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နောက်ရက်တွေအထိ အဲဒီအကြောင်းက စိတ်ထဲမှာ ရောက်နေတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလည်း။ ကျွန်တော် ရေးဖူးသလောက် ကဗျာဆိုတာကလည်း ကောင်းတာ၊ မကောင်းတာထက် ကိုယ်တိုင် မွေးဖွားလိုက်တာတွေပဲ။ စဉ်းစားပါတယ်။ စဉ်းစားရင်း နောက်တော့ အဖြေတစ်ခုတွေ့လာပါတယ်။ ကွန်မန့်တွေပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ မလည်မဝယ် နဲ့ကျွန်တော် ဇာတ်ရှုပ်မိသွားပါပြီ။
ကျွန်တော်က သူများတွေစာကိုဖတ်တယ်။ ပြီးရင် ကွန်မန့်ရေးတဲ့အခါမှာ စိတ်ထဲရှိသလိုပဲ ရေးတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကဗျာတွေဖတ်တယ်။ နောက်ပြီးကျရင် ကဗျာဆိုတော့ ကွန်မန့်မှာ ဘာပြောရမလဲ မစဉ်းစားတတ်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ ရှိလာပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော် ဖတ်မိတဲ့ကဗျာလေးထဲက စိတ်ကို စွဲဆောင်သွားတဲ့ စာသားလေးတွေကို ချရေးလိုက်တာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ခေါင်းစဉ်ကိုတောင် ပြန်ကူးရေးပေးခဲ့တတ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ အောက်မှာ “သုခမိန်(E-Journal)”ဆိုပြီး ရေးလိုက်တော့တာ။ အဲဒီမှာ နားလည်မှုလွဲတယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာ အရမ်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို နားထောင်အပြီး လိုက်ဆိုလိုက်သလိုပါပဲ။ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ၊ တောင်ရောက် မြောက်ရောက်။ သံပြိုင်အပိုဒ်ဆိုလိုက် စိတ်ဝင်စားတဲ့ စာသားလေး ကောက်ရွတ်လိုက်။ အဲဒီလိုပါခင်ဗျာ။ ပြန်ကူးချရခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုပိုင်ကဗျာ မဟုတ်ပါ။
ဒီစာစုဟာ တောင်းပန်ခြင်းစာစုဖြစ်သလို၊ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ဆုံးမခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်ခဲ့မိတာကို ပြောတာဆိုရင် (ကွန်မန့်မှာ ပြန်ကူးချထားတာဆိုရင်) ဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ။ တောင်းပန်မှုလည်း ပြုအပ်ကြောင်းပါ၊ အမည်မသိခင်ဗျား။ နှောင်ကိုလည်း အဲဒီလို ကွန်မန့်မျိုးမရေးဖြစ်အောင် ကျွန်တော် ထိမ်းသိမ်းရပါတော့မယ်လို့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်လည်း ဆုံးမဖြစ်လိုက်ကြောင်းပါ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်ရေးထားသော (ဒီဘလော့ဂ်လေးမှာ တင်ထားသော) ကဗျာဟာ တူညီနေတာဆိုရင်လည်း သေချာညွှန်ပြ ပြောသွားနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ တင်ထားတာတွေအတွက် ကူးယူထားရင်လည်း ကူးယူထားကြောင်း ပြောပါတယ်။ မပြောဖြစ်ဘဲ ကျန်ရစ်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အားနာစရာမရှိ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမထားပဲ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်လည်း အလည်လာရောက်လို့ အားပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့ အပြုအမူရှိနေရင် တောင်းပန်ပါတယ် အမည်မသိခင်ဗျား။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 9:08 AM 1 comments
မင်း ဘာကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတာလဲကွာ …
ကိုယ့်အကြည့်တွေကို မုန်းလို့လား ?
အထင်းသား မြင်ရတဲ့အခါ …
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တောကြောင် at 4:48 PM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 8:21 PM 1 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 6:13 PM 17 comments
ပြီး ခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ညက ကျနော့ အကိုရယ် ၊ ကို အိမ်လွမ်းသူရယ် ၊ ကျနော်ရယ် ခြင်္သေ့ ကျွန်းက အရှေ့ဘက် ကမ်းခြေလေးမှာ ည ဘက်ကြီး လမ်းလျောက်ထွက်ကြရင်း ရေးဖြစ်တဲ့ စာစုလေးပါ ။ အကိုနဲ့ ကိုအိမ်လွမ်းသူကတော့ ဖုန်းတွေနဲ့ အသဲတွေ အသက်တွေ လုပ်ရင်း မအားလပ်ကြ ။ ကျနော်ကလည်း အပြောကျယ်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့ ပင်လယ်ကို ကြည့်ရင်း အားတွေငယ်ပေါ့လေ ။
၀ိုင်းဝိုင်းစက်စက် လမင်းကြီးရယ် ၊ အပြာရောင် ကောင်းကင်ကြီးရယ် ၊ ရေပေါ်က ရွာတန်းရှည်ကြီးရယ် လှိုင်းပုတ်သံတွေရယ် ညို့ငင်မှု့တွေ ကြားမှာ ကျနော်လည်း မဆွတ်ခင်က ညွှတ်ချင်နေသူ ပီပီ ကျနော့ရဲ့ တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို လွမ်းပါသည်။
“ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းတယ် ပြန်တော့မယ်” ဆိုတာကလည်း အသက်တွေမှ မငယ်ကြတော့ စိတ်နောက် ကိုယ်ပါ လုပ်ဖို့ အတော် ခက်ပါသည် ။ ပင်လယ်ရယ် ၊ လမင်းရယ် ၊ ကောင်းကင်ကြီးရယ် ၊ လှူပ်ရှားနေကြဆဲ လူတွေရယ် ၊ အိပ်မောကျနေဆဲ လူတစ်ချို့ရယ် ကိုငေးကြည့်ရင်း ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲလို့ ဖြေသိမ့်ရပြန်ပါသည် ။
လရောင်ရဲ့ အေးမြမှု့ကို လူတစ်ချို့ ရှာဖွေ ကြည်နူးနေချိန်မှာ ၀မ်းတစ်ထွာ အတွက် ညဆိုတာကို မစဉ်းစား နိုင်အားသော သူများကလည်း တစ်ချို့။
ဘ၀ဆိုတာ ဘာလည်းလို့ သေချာသိချင် မနေတော့တာကတော့ ရှုပ်ထွေးများပြားလှသော အဖြေများကြောင့်လည်း ဖြစ်မည်ထင်ပါသည် ။ လူဖြစ်လာသူချင်း အတူတူ တစ်ချို့က လူပီပီ သသ မဖြစ်ကြရသေးတာ မြင်သော အခါ ဘ၀ဆိုတာ ရယ် ၊ ကံရယ်၊ အတိတ်ကံရယ်ကို မမှီ မကမ်း ဆက်စပ် ကြည့်ချင်ပြန်ပါသည် ။
ထို သို့သော တောင်ရောက် မြောက်ရောက် အတွေးစများကို စုစည်း ရန် မလွယ်လှသော်လည်း သူမကို ကျနော် လွမ်းတာကတော့ အသေအချာ ။ လှလှ ပပ လွမ်းသော အလွမ်းဖြစ်ရန်ကတော့ နည်းပါးလွန်းလှသော ရာနှုန်းတစ်ခုသာပါ။
တစ်ဘက်သက် နှင့် အချစ် ဆိုသော စကားလုံးကိုတော့ သူမက ကျနော့် သမိုင်းထဲကို ပူးတွဲ ပြီး ဆွဲဝင်လာသူသာဖြစ်သည် ။ သို့မဟုတ် သူမနှင့် အတူ ထို စကားလုံးများကို ကျနော့ သမိုင်းထဲသို့ ပစ်ချခံရခြင်းလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်မည်။ အချစ်ဆို တာ ဘာလည်း ၊ ချစ်ဖူးခဲ့ပြီလား ၊ မသိလိုက် မသိဘာသာ ကျော်ဖြတ်သွားပြီလား လားပေါင်းများစွာနဲ့ေေ၀၀ါးနေဆဲ ကျနော့် ဘ၀ကို ဒါဟာ အချစ်လို့ လင်းလက် ပြသသူကတော့ သူမသာ ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ထို့ထက် မဝေးလှစွာသော အတိတ် က ယင်းမာပွင့်ချိန်သည် ကျနော့ အချစ်တို့မွေးဖွားရာ ၊ မျှော်လင့်ချက်တို့ ရှင်သန်ထမြောက်ရာ ရာသီသာ ဖြစ်သည်။
ထင်မှတ်မထားသော၊ မမျှော်လင့်တော့သော၊ ထို့ထက် မွေးဖွားလာမည် မထင်တော့သော အချစ်ဆိုသော ဘာသာစကားသည် ကျနော့ ဒုတိယ မိခင် ကျောင်းတော်က ကန်တင်းမှာ ဘာမှ ပြင်ဆင်ချိန်မရပဲ ကျနော့် ရင်မှာ တွယ်ကပ်ပြီး မသေမသပ် မွေးဖွားခဲ့လေသည် ။ တစ်ချိန်ထည်းမှာပဲ လူလားမြောက်လာခဲ့ ၊ရှင်သန်ခဲ့သည်ဟုလည်း ပြောမှ အဓိပ္ပယ် ပြည့်စုံလိမ့်မည် ။
မချစ်ဘူးခဲ့သူမို့ထင်သည် ကျနော်သည် အချစ်ရေးမှာ မသေသပ်လှချေ ။ ပျော်ပျော်နေတတ်သော၊ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းနေတတ်သော ကျနော်သည် သူမအား ချစ်မိနေပါကြောင်းကို လိမ်လည်ဖုံးဝှက်ရန် မစွမ်းသာခဲ့ ။ ကံအကြောင်းမလှ လို့ လူသိသွားတာဟု ပြောရန်လည်း ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်မလုံ လှ။ ဟန်ဆောင်ကောင်းသည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးခဲ့ဘူးသော်လည်း စာမေးပွဲတွေ့မှ ချွေး ဒီးဒီး ပြန်ကျလာလေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်သည် ၀န်ခံခဲ့ရလေသည်။ ထို့ကြောင့် ပဲ ကျနော်တို့ ပြဇာတ်သည် လွမ်းမောဖွယ် မဖြစ်ခဲ့ပဲ ကျနော်သာ ကြေကွဲနေရသူ ဖြစ်ခဲ့သည် ။ ကိုထီး ရဲ့ သီချင်းလို "သခင်ရယ် ကြည်နုချစ်ခွင့် ရမလား ၊ မော် ဖူး ကြည့်ခွင့် ရှိမလား" တောင် မေးခွင့် မရ ။ ဘာကို အပြစ်ပုံချမလဲကတော့ စဉ်းစားကြည့်ရင် ခေါင်း အတော် ပူလေသည်။ သူမ နှလုံးသားကို ထိအောင် မပစ်ပဲ ကျနော့ နှလုံးသားမှာတင် ရပ်တန့်သွားသော မြှား ပစ်ရှင် ကို မြှားနတ်မောင်ကိုတော့ အားပိုထည့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ပစ်ပေးပါ ဟု တောင်းပန်ချင်ပါသည်။
မြင်သော ကြည့်သော ထောင့်များ လည်း ကွာဟနိုင်လေသည်။ ကျနော်တို့ ခံစားချက် ၊ အမြင်များလဲ ကွဲလွဲခွင့် လွတ်လပ်စွာ ရှိကြသည် ။ သူမ ကျနော့်ကို မချစ်ခဲ့တာကတော့ ဖြေရှင်း မရခဲ့သော ပု စ္ဆာ သာဖြစ်သည်။
တစ်ခု ပြောရန်ရှိသည်က သူမသည် တွေ့စကတည်းက ကျနော့ကို မဖြားယောင်းခဲ့ချေ ။
ကျီးမနင်းပဲ ကြွေခဲ့သော ထန်းသီးသည် ကျနော် ။ လူတော်တစ်ယောက် မဖြစ်သော်လည်း လူကောင်းတစ်ယောက်တော့ သူမကြောင့် ကျနော် ဖြစ်လာခဲ့ဘူးသည် ။ စာဆိုတာ စာမေးပွဲဖြေရန် တစ်ညလိုမှ ထဖတ်တတ်သော ကျနော်သည် အတန်းမှန်မှန် တက်တတ်လာလေသည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်ကို မုန်းမိလာသည်ဟု ကျနော် ပြောလျင် သူမကတော့ ပိတ်ရက်တွေက နည်းလိုက်တာဟု သူမရဲ့ ကျောင်းဖွင့်ရက် ငရဲခန်းကို ပြန်မရချင်လှစွာ ရေရွတ် မည်တမ်းလိမ့်မည် ထင်ပါသည်။
ကျနော့်ရဲ့ သူမကတော့ ကျနော်နှင့် အဲလို အရှေ့နှင့်အနောက် ခံစားချက်ခြင်း တော်တော် တူလေသည် ။
မကြာတော့သော ကာလမှာ ကျနော့ ချစ်သက်တမ်း ၆ နှစ်ပြည့်တော့မည် ။ အမှတ်တရ အဖြစ် ကဗျာတစ်ပုဒ်လောက် အံချချင်သော်လည်း စကားလုံးများက ရှားပါး လှစွာ ။ ကာရံ ပျောက် နေဆဲ စကားလုံးများကို ပြန်စုစည်းသော်လည်း ကဗျာဆိုတာက ပီပီသသမဖြစ် ။
အဲ ဒါကြောင့် ကျနော် ဖတ်ဘူး ပြီး ကြိုက်မိနေဆဲ ကဗျာတစ်ပုဒ် ကို ပြန်ရေးချရင်း ကျနော့် ခံစားမှူ့ စာစုကို နိဂုံး ချုပ်လိုပါသည် ။ “သုည” ၀တ္ထုထဲက ကဗျာလေးပါ။ (ဆရာ မင်းခိုက် စိုးစံ လား၊ ဆရာ တာရာ မင်းဝေ လား ကျနော် မသေချာလှပါ)
ခပ်ကြာကြာ ထိုင်ကြည့်ခွင့် ရယုံ လေးတင်ပါပဲ
ဒီ့ အပြင် ဘာမှ မပိုခဲ့ဘူး
ငါ ဆိုတဲ့ ကောင်ကလည်း သွေးအေး
လွမ်း . . တယ် . . . ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 4:21 PM 8 comments
ကမ်းခြေကို စွန့်ခွာသွားတဲ့ လှိုင်း
စကားလုံး အရိုင်းတွေသုံးပြီး လှည့်ထွက်
(မင်းမှာကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားရော ရှိရဲ့လားကွာ ။)
နေ့နဲ့ည တွေကိုညာလို့ရရင် ကောင်းမှာ။
ညာ နေ ခဲ့ ရ တယ် ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တောကြောင် at 3:26 PM5comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 9:53 AM3comments
ဆရာ Republic ရဲ့ “SCALING ”ကို ခံစားအပြီးမှာ ရေးခဲ့တဲ့ comment ပါ။
မိတ်ဆွေက ပို့စ် အဖြစ်တင်ပြီး သိမ်းထားဖို့ တိုက်တွန်းတာကြောင့် “မြင်သိပုံရှုထောင့်” လို့ အမည်တပ်ကာ ဝတ္ထုတိုအဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မဟုတ်ပါဘူး “အို” ပါ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:05 PM7comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် မာရေးသျှင်, ဝတ္ထုတို
ဆရာမ ပန်ဒိုရာ ရဲ့ “တိမ်ကိုငုံ့မိုး”ကို ခံစားအပြီးမှာ ပွင့်အန်လျှံကျလာခဲ့တဲ့ comment ပါ။
မိတ်ဆွေက ပို့စ် အဖြစ်တင်ပြီး သိမ်းထားဖို့ တိုက်တွန်းတာကြောင့် “ထိုးဇာတ်” လို့ အမည်တပ်ကာ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုး….. အဝေးက မြစ်က
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:45 PM3comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 11:30 AM3comments
မယ် “ငါသာလျှင် ငါ့ကံ၏အရှင်သခင် (၅) သို့ မှတ်ချက်”
“ခင်များသဘောမတူဘဲ ဘယ်သူမှ ခင်များကိုနာကျင်အောင် မလုပ်နိုင်ပါ။”
ခင်များ တွေ့ကြုံဖြစ်ပျက်နေသမျှအရာရာဟာ ခင်များ မဆင့်ခေါ်ဘဲ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ရောက်လာကြတာ တစ်ခုမှ မဟုတ်ပါ။ အဲဒါတွေဟာ ခင်များမလိုချင်တာတွေဆိုရင်တောင် ပြိုင်ဖက်တင်ပေးဖို့ ခင်များရဲ့ ပျက်ကွက်မှုကြောင့်သာ တစ်ယောက်တည်းပြေးပြီး ပန်းဝင်ဗိုလ်စွဲလာတဲ့ အရာတွေမျှသာ။
ဘယ်သူကတော့ သူ မလိုချင်တဲ့အရာတွေကို တမင်တကာ ဆွဲဆောင်ဖိတ်ခေါ်ပါ့မလဲ။ လိုချင်တာကို ဆွဲဆောင်ရကောင်းမှန်း မသိလို့သာ (သို့) လိုချင်တာတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်လို့သာ မလိုချင်တာတွေရဲ့ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ဝင်ရောက်ခြင်း ခံနေကြရတာပါ။
မကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်စရာ ကောင်းတာတွေကို ဆွဲဆောင်ရမှာ ခင်များဝန်တာ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 7:19 PM5comments
“ကိုယ့်စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ဘဝကိုပဲ ကိုယ်ရတယ်”
ကျနော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေက ကျနော်တို့ဘာတွေတွေးနေသလဲဆိုတာကို ဖော်ညွန်းနေပါတယ်။
ခင်များရဲ့ ခံစားချက်တွေ အဝင်အပါ ဒီကမ္ဘာမှာ ခင်များ တွေ့ကြုံဖြစ်ပျက်သမျှအရာရာဟာ အကျိုးတရားတွေမျှသာပါ။ တကယ့်မူလပဓာနအကြောင်းတရားကတော့ ခင်များရဲ့အတွေးတွေပါ။
ခင်များ ပျော်ရွှင်နေသလား၊ စိတ်ညစ်နေသလား ခင်များကိုယ်တိုင်သာ အသိဆုံးပါ။ ခင်များကိုခင်များ မသေချာရင် ထပ်ခါထပ်ခါ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်စီစစ်ပါ။ အဲဒီအခါ ခင်များ ခံစားချက်တွေအပေါ် ခင်များ ပိုပြီး သတိထားတတ်လာမှာပါ။
အရေးကြီးဆုံးအရာကတော့ ခင်များ ကောင်းတာတွေ တွေးနေတဲ့အချိန်မှာ ခင်များ စိတ်ညစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ ခင်များ စိတ်ညစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ခင်များ စိတ်ညစ်စရာတွေတွေးနေလို့ ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။
ခင်များရဲ့အတွေးတွေကို ရွေးချယ်တာ ခင်များပါ။ ပြီးတော့ ခင်များရဲ့ခံစားချက်တွေကို ခံစားတာလည်း ခင်များပါပဲ။ ဒီတော့ အရာရာကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ စွမ်းအားလည်း ခင်များမှာပဲ ရှိပါတယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 7:39 PM 1 comments
၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)
သူ့အဖေ နဲ့ သူ့အမေကို သူရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
သူ့အဖေ နဲ့ သူ့အမေကလည်း သူ့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။
သူ့ဆွေမျိုး၊မောင်နှမများကို သူရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
သူ့ဆွေမျိုး၊မောင်နှမများကလည်း သူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။
သူ့လိင်အမျိုးအစားကို သူရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
သူ့သွေးအမျိုးအစားကို သူရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
သူ့မွေးနေ့၊မွေးရက်၊မွေးချိန်များကို သူရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
သူ့ဇာတိချက်မြှုပ်ရာ ဒေသရပ်ရွာကို သူရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
ထို ရွေးချယ်ခြင်း အလျဉ်းမရှိသော ကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဟာ ---
ယခုအခါ (၂၆) နှစ်ပြည့်မြောက်ပါပြီ။
သူက ကျနော့်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
ကျနော်က သူ့ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။
ထို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်က ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း အလျဉ်းမရှိသော
ဘတ်စ်ကားပေါ်က ထိုင်ခုံမှာ မတော်တဆ ဆုံသလို
တစ်မိသားစုတည်းမှာ ညီအစ်ကို အဖြစ်ဆုံပါတယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:51 PM4comments